Naya Post Nepal | हिरासतमा रहेका नायक पल शाहका लागि आयो खुसीको खबर !
हिरासतमा रहेका नायक पल शाहका लागि आयो खुसीको खबर !
साढे दुई करोड लागत रहेको ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ ले रिलिज भएको एक हप्तामै पाँच करोडको व्यापार गरेको दा”बी गरिएको छ । फिल्मकी निर्माता एवं नायिक पूजा शर्माले एक हप्तामा नै फिल्मले ४ करोड ९५ लाखको व्यापार गरेको फेसबुकमार्फत दाबी गरेकी हुन् ।
एक गायिकामाथि नायक पल शाहमाथि ज’बर्जस्ती क’रणी आ’रो’पको जा’हेरी परेको भोलिपल्ट उनैले खेलेको फिल्म रिलिज भएको थियो । फिल्म रिलिज हुने दिन नै ग’म्भीर आरोपमा जाहे’री परे पनि एक हप्तामा नै फिल्मले राम्रो आम्दानी गरेको दाबी गरिएको हो ।
रिलिजको अघिल्लो दिनको प्रिमियरमा उपस्थित हुन खोजे पनि जाहेरी परेका कारण पल रोखिएका थिए । केही प्रहरीको खोजीमा रहेका पलले केही दिनमै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ पुगेर आफैं गिर’फ्तारी दिएका थिए । सात दिने म्याद म्यादको अवधिमा शाहमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । फिल्म रिलिज भएको शुक्रबार एक हप्तामात्रै पुगेको छ ।
‘जय दर्शक जय नेपाली सिनेमा
आज बाट भव्य सफलता साथ देशभर दोश्रो हप्तामा ३म)यस्तो)गीत)गाँउछु)२ सम्पूर्ण सिनेमा हलहरू सम्पूर्ण पत्रकार ज्यूहरू सम्पूर्ण दर्शक ज्यूहरू सम्पूर्ण चलचित्रकर्मी ज्यूहरू मा यो माया सम्मानको लागी मनै देखी धन्यबाद
म यस्तो गीत गाँउछु २’ नायिक एवं निर्माता शर्माले सामाजिक संजालमा लेख्दै पहिलो हप्ता फिल्मले चार करोड ९० लाख उठाएको दाबी गरेकी हुन् ।
सुदर्शन थापाको निर्देशनमा बनेको यो चलचित्रमा पूजा शर्मा, पल शाह, हरिहर शर्मा, दिनेश डीसी लगायतको मुख्य भूमिका छ ।
थापाको तर्फबाट उनकी दिदी तारा रानाले प्रहरीमा उजुरी दिएकी हुन् । थापाको तर्फबाट उनकी दिदी तारा थापाले ए वान मिडिया र सर्मिला वाइ’बावि’रु’द्ध जाहेरी दर्ता गराएकी हुन् ।
व्यूरोका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक नवीन्द अर्यालका अनुसार ए वान मिडिया दर्ता भए नभएको जानकारी दिन प्रेस काउन्सिललाई पत्रचार गरिएको छ
२०७८ फाल्गुन २१, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 787 Views